Album farshaxanka Finder u Mac
> Resource > Download > Sida loo helo Album farshaxanka
Ma leedahay maktabad music waaweyn laakiin files music waa unorganized? Dhammaan ee files music aad ku Lugood ama ay qayb tahay kaydsan PC ah? Ma jeclaan lahayd inaad eynaan maktabadda music aad iyo aad u hesho farshaxanka album sida magaca artist, sanadkii sii daayo, lyrics iyo wax ka badan?
Waxa kale oo aad edit karaa iyo Cudarada farshaxanka album baxey in files music aad la TidyMyMusic u Mac . Ha aad is ogow of faylasha nuqul. Si fudud tixraac tallaabooyinka hoose si aad u hesho tilmaamo dheeraad ah. Ma qaadan doontaa waqti aad u dheer, waayo, waxaad u leedahay in khaatiyaanka dhamaystiran oo maktabadda music aad.
Talaabada 1: nafta maktabadda music (ama geliyaan files music)
Talaabada 2: Raadi farshaxanka album (iyo edit baxey farshaxanka album)
Talaabada 3: Goobidda iyo tirto faylasha nuqul
In ay leeg- navigation aad ka tagay, waxaad yeelan doontaa in aad u aragto files music in uu kaydiyaa Lugood ee nidaamsan Lugood . Waxa kale oo aad edit karaa macluumaadka la heli karo adigoo gujinaya ka qalin icon dhinaca midig ee interface ka.
Kuwa ku kaydsan ee drive Mac, waxaad u baahan doontaa in jiidi-iyo-hoos u soo gelin Music nadiif ah iyo macluumaadka la heli karo farshaxanka album xaalkaa si la mid ah.
Marka aad ku nastay maktabadda music ama uploaded files music, waxaad sii wadi kartaa in ay sameeyaan baaritaan ku maktabadda music aad. Waxaad dooran kartaa in Raadi Songs Allaha , Raadi labalaabka Songs , ama labadaba sameeyo waqti isku mid ah. Ka dib markii in, guji Scan . Software ayaa si toos ah u soo ceshano doonaa farshaxanka album gabaygii kasta inta lagu jiro habka iskaanka ah.
Yeelan doontaa in ay u arkaan tirada songs in la aqoonsaday sidoo kale files nuqul on top of interface Waxaad. Waxaad muujiyo kartaa file ah mar ama si fudud loo muujiyo oo dhan ka dibna Codso ugu farshaxanka album baxey in mid kasta oo iyaga ka mid ah.
Haddii kale, waxaa samayn mid mid ka dibna xaalkaa macluumaadka baxey marka aad dhaaftid.
Processing Dufcaddii ayaa sidoo kale u shaqeeya faylasha nuqul. Sida ku cad shaashada ka, aad files nuqul laga tilmaami doonaa by a √ iyo X , oo wakiil ka ah tayada sare ee hore iyo hoos u dhaca dambe. All inaad samayso waa guji Dedupe in ay tirtirto faylasha nuqul.
Sida loo Download Videos ka ABC News
Sida loo Download Videos ka Lynda